Ngaba Siphephe Ngoku?
Izenzo zobudlova obunobundlobongela ziqhutyelwe eUnited States ngabakwamanye amazwe kunye nabasekhaya okanye "basekhaya" abanobudlova obundlobongela kwiminyaka emininzi. Ngawaphi amanyathelo oorhulumente waseburhulumenteni wase-US athatha ukuthintela ukugqithisa okunobundlobongela kunye nendlela abaphumelele ngayo?
Yiyiphi i-Violent Extremism kwaye Ubani?
Ubugqithisi obundlobongela ngokubanzi buchazwe njengezenzo zobundlobongela obubangelwa yimfundiso engqongqo, inkolo, okanye yezopolitiko.
EUnited States, izenzo ezinobundlobongela obunobundlobongela ziqhutywe ngamaqela angxamnye noorhulumente, abamhlophe abamhlophe kunye namaSulumane amakhulu, phakathi kwabanye.
Imizekelo yamva yezo hlaselo zibandakanya ukuqhubhisa kwe-1993 kwiNational Trade Centre yeNew York, ngama-Islamist amaninzi, apho kwabulawa abantu aba-6; Ngomhlaba ka-1995 ibhomu lika-Alfred P. Murrah isakhiwo senkundla yase-Oklahoma City ngokubhekiselele kumntu onxamnye noorhulumente, apho abantu abayi-168 baphulukana nobomi babo; kunye no-2015 ubukhulu bokudubula eSan Bernardino, eCalifornia ngumbhangqwana wama-Islamist, owathatha ubomi obu-14. Ngokuqinisekileyo ukuhlaselwa kwabangqongqangi ngoSeptemba 11, 2001, okwenziwa ngamaSulumane amakhulu kunye nokubulala abantu abayi-2,996, kubonakale kukuhlasela okubulalayo kubangelwa kukugqithisa ubudlova kwimbali yase-US.
Iinkcukacha ezipheleleyo zezo zihlaselo ezenziwa ngabangqineli bezobudlova ukususela ngoSeptemba 12, 2001 ukuya kuDisemba 31, 2016, okubangelwa ukufa kungatholakala kwi- Ofisi ye-Accountability Office (GAO) GAO-17-300 .
Impembelelo ye-'Grouwn 'Extremism
Ngoxa uSeptemba 11, 2001, ukuhlaselwa kwabaqhubi bezobudlova bangaphandle, idatha evela kwi-US Extremist Crime Database (i-ECDB) njengoko kuboniswe kwi-GAO bonisa ukuba ukususela ngoSeptemba 12, 2001 ukuya kuDisemba 31, 2016, ukuhlaselwa okuqhutywe ngabaxinzeli bezobudlova " "EUnited States kwaphumela ekufeni kwabantu abangama-225.
Kuloo-225 abantu abafa, abangama-106 babulawa ngabantu abahlala kwinqanaba elincinci, kwaye ama-119 ayenamaxhoba angama-Islamist enobudlova obundlobongela kwiziganeko ezihlukeneyo ezingama-23. Ngokutsho kwe-ECDB, akukho ziphumo ezibangelwa zizinto ezikude ezisekhohlo.
Ngokutsho kwe-ECDB, ukufa okubangelwa zihlaselo ezenziwa ngamanqanaba aphelileyo aphelile ukufa kwabantu abahlaselwa ngama-Islamist amaninzi kwiminyaka eyi-10 kwiminyaka eyi-15 ukususela ngoSeptemba 12, 2001, kwaye babenjalo kwiminyaka emithathu.
Yintoni Eqhuba Izidlova Zezobudlova?
I-ECDB ichaza kude ekuhlaseleni abahlaseli bezobudlova njengokuba neenkolelo ziquka ezinye okanye zonke ezi zilandelayo:
Ukhuselo olunxamnye noluntu jikelele okanye ngamazwe ngamazwe;
Ukugxeka kweenjongo zombuso kunye negunya likaRhulumente;
Ukuhlonela kakhulu amalungelo ngamalungelo, njengobunikazi bompu okanye inkululeko kwerhafu;
Ukukholelwa kwiingcamango zobuqhetseba ezibangelwa iingongelo ezinzulu kulawulo lwentlanga okanye inkululeko yomntu;
Ukukholelwa ukuba urhulumente uhlasele okanye sele sele ethathe "indlela yabo yobomi."
Ukukholelwa kwisidingo sokulungiselela ukuhlaselwa okunjalo ngokuthatha inxaxheba kumalungiselelo e-paramilitary kunye noqeqesho okanye ukusinda.
I-ECDB iphinde ixelele kwi-GAO ukuba abaninzi abaxhomekeke kunene baxhasa inkxaso yecala lokuphakama kwamhlophe, njengeKu Klux Klan kunye neo-Nazism.
Ngokusekelwe kwiingxelo zabo ezenziwe ngaphambili, ngexesha okanye emva kokuhlaselwa kwabo, okanye ubungqina obuthathwe ngamapolisa, i-ECDB ithi iingqungquthela ezinobundlobongela beziSilamsi ngokubanzi zivakalisa inkolelo okanye ukunyaniseka kwi- Islamic State yase-Iraq ne-Syria (ISIS), i- al Qaeda okanye elinye iqela lama-Islamist elibandakanyekayo.
Indlela i-US Counters Vierent Extremism
ISebe loKhuseleko lwaseKhaya, iSebe lezoBulungisa , i-Federal Bureau of Uphando, kunye neZiko loKhuselana noBuphikisana neSizwe lijongene nokuphumeza iSicwangciso soPhuhliso lweSicwangciso-qhinga sika - 2011 sokuthintela ukuxhatshazwa kobudlova eMelika.
Njengoko i-GAO ibona, ukuphikisana nobudlova obundlobongelayo buhluke kwi-counterterrorism.
Nangona ukulwa nobugqirha kugxininise ekuhlanganiseni ubungqina kunye nokubanjwa ngaphambi kokuhlaselwa, ukuphikisana nokuxhatshazwa kwezobudlova kubandakanya ukuhanjiswa kwabantu, ukubandakanya, kunye nokucebisa ukukhusela abantu ukuba bahlaselwe ngogonyamelo.
Ngokutsho kwe-GAO, urhulumente uthatha indlela echanekileyo yokumelana nokugqithisa okunobundlobongela ngokunyanzela imizamo yabantu abaqhelanisiweyo ukuba baqashe, bahlaziye kwaye baququzelele abalandeli abatsha.
Amacandelo amathathu alo mzamo osebenzayo:
Ukuxhobisa uluntu kunye neenkokheli zoluntu;
umyalezo kunye nokuthumela imiyalezo; kwaye
ukuchonga nokujongana nezizathu kunye nemikhosi yokuqhubela phambili.
Nangona iinzame zomthonyama zokulwa nobukhohlakali zibandakanya imisebenzi efana nokuqokelela ingqiqo, ukuqokelela ubungqina, ukubopha, nokuphendula kwiziganeko, inzame karhulumente yokuthintela ukugqithisa ubudlova kugxininise ekukhuseleni abantu ukuba bafumane okanye benze okuthile ngenjongo yokwenza ubugonyamelo.
Ugxininiso kuLuntu lwasekuhlaleni
NgoFebruwari 2015, ulawulo luka-Obama lukhuphe iphepha elithile elithetha ukuba ukuphikisana nobudlova obundlobongela kudinga ukuhlanganisa iinkqubo zokuthintela ukulwa nobugebengu kunye noluntu kunye nokunyanzeliswa komntu ngamnye ukwenzela ukunciphisa ukhenketho kwiimfudu ezinobundlobongela kunye neengcamango zabo ezikhuthaza ubudlova.
Ukongezelela, ulawulo luka-Obama lubonise ukuba iinzame zikaRhulumente zokulwa nokunyaniseka kwezobudlova azibandakanyi ukuqokelela ulwaphulo-mthetho okanye ukwenza uphando malunga nenjongo yokutshutshiswa komthetho.
Esikhundleni saloo nto, yaqaphela iNdlu ye-White House, urhulumente kufuneka akwazi ukujongana neengcinezelo ezinobundlobongela obuqhelaniswe ngu:
Ukwakhiwa kokwazisa uluntu: Ngokomzekelo, i- Attorney yase - US kunye neSebe lezoKhuseleko lwaseKhaya lokusingathwa kweendawo zokuhlala apho banikezela ngolwazi malunga nokuchonga umsebenzi osolwayo.
Ukuqhagamshelana neengxelo ezinobundlobongela obunobundlobongela: Ngokomzekelo, iSebe lezoBulungisa, lijongene noMbutho wamaZwe weeNkundla zamaPolisa ukuvelisa iziphakamiso zokwazisa ukuchasisa ukusetyenziswa kweendaba ezentlalo kwi-intanethi ukuhlaziywa kunye nokufumana abantu ngabanye.
Ukugxininisa ukungenelela koluntu: Ngokomzekelo, i-FBI inikeza izixhobo zokunceda uluntu luchonge kwaye luqeqeshe abasebenzi bezentlalo kunye nabaqeqeshi bempilo yengqondo abangakwazi ukuncedisa abantu abasengozini kunye nokubathintela ukuba babe yi-radicalized.
Nangona uninzi lwale mizamo yokulwa nokugqithisa okunobundlobongela okwenzeka kwinqanaba lendawo, inxaxheba yombuso karhulumente ngowona unxulumene nenkxaso-mali kwaye usasaza izinto zophando kunye noqeqesho, nokufundisa uluntu. Imizamo yezemfundo eyenziwa ngeeforamu zoluntu zendawo, iiwebhsayithi, iindaba zoluntu, kunye noonxibelelwano kuburhulumente kunye noorhulumente basekhaya, kubandakanywa nee-arhente zokuthotyelwa komthetho.
Ndingu-US okhuselekileyo kwi-Violent Extremism?
ICongress yabuza i-GAO ukuba ihlolisise inkqubela eyenziwe yiSebe lezoBulungisa, iSebe lezokuKhusela kwaseKhaya, i-FBI, kunye nabachaphazelekayo basekhaya ekuphunyezeni iSicwangciso soPhulo lweSicwangciso-qhinga sika-2011 sokuthintela ukuxhatshazwa kobudlova eMelika.
Kwimpendulo yayo yo-Ephreli 2017 kwiCongress, i-GAO yathi ukuba ngo-Disemba 2016, ii-arhente ezijongene nokulwa nokunyanzeliswa kobudlova ziye zaqalisa ukusebenza kwe-44 kwimizuzu engama-44 ejoliswe ngaphakathi ekhaya equlethwe kwisiCwangciso soPhuhliso lweSicwangciso se-2011. Imisebenzi engama-44 ijoliswe ukujongana neenjongo ezintathu eziphambili zenkqubo: ukufikelela koluntu, uphando kunye nokuqeqesha, nokwakhiwa kwamakhono - ukuphuhlisa izakhono, izilwanyana, amandla, iinkqubo kunye nezibonelelo ezifunekayo kuluntu ukukhusela ukuxhatshazwa kobudlova.
Nangona i-19 yemisebenzi engu-44 yayisetyenzisiwe, i-GAO yabika ukuba imisebenzi engaphezulu engama-23 iqhubekile, ngelixa kungekho nto ithathwe kwizinto ezimbini. Imisebenzi emibini engakaze idibene nayo yayiquka, ukuphunyezwa kokulwa neenkqubo ezinobundlobongela kwintolongo kunye nokufunda kumava awayengumngcipheko wangaphambili.
I-GAO yafumanisa ukuba ukungabi naso "isicwangciso-mbambano okanye inkqubo" yokulinganisa umzamo jikelele wokulwa nokugqithiswa kwezobudlova kwenza ukuba kube nzima ukucacisa ukuba i-United States ikhuselekile namhlanje kunokuba ngo-2011 ngenxa yesiCwangciso soPhuhliso lweSicwangciso-qhinga.
I-GAO icetyise ukuba iCandelo loKhuselana loLwaphulo-mthetho oluPhezulu loLwaphulo oluPhulayo luphuhlisa isicwangciso esihambelanayo kunye neziphumo ezilinganiselweyo kwaye kusekwe inkqubo yokuvavanya inkqubela phambili yeenzame zokukhawuleza.
IMfazwe yaseMexico naseMelika: iMfazwe yaseRaaca de la Palma
Indlela iinjongo zee-Forensic ze-Innscience ziSebenzisa iinambuzane ukuba zixelele ukuba iBhunga liye lashukunyiswa
Abanomdla Abanomdla kwiMfundo ekhethekileyo
Ukupakisha ukuPhula kweSwitzerland
Jedi Master Sifo-Dyas kunye neMvelaphi yeColone Army
Ukukhetha Imibala yePaint yangaphandle - Izinto zokucinga ngazo
Reek, Wreak, kunye ne-Wreck
Amanqanaba e-Isotope amanxweme (i-MIS) - Ukulandelwa kwemozulu yehlabathi lethu